Eriri optic ọkụ ọdọ mmiri eriri optic cable flooring echichi - China KepuAi Photoelectric
Eriri optic ọkụ ọdọ mmiri eriri optic cable flooring echichi
Eriri ika: Mitsubishi
Eriri n'obosara: 0.75mm 7 strands & 1.2mm 14 uzo & 1.5mm * 1 strands
Light engine: DMX 1002 / DMX 502 / DMX 1001 & 75w ìhè engine
End kwesịrị ekwesị: Nhọrọ
An ngwa anya eriri USB bụ a cable nwere otu ma ọ bụ karịa ngwa anya emep uta eri na-eji na-ekesa ìhè. The ngwa anya eriri ọcha na-a n'otu n'otu ntekwasa na plastic n'ígwé na ẹdude na a na-echebe tube kwesịrị ekwesị n'ihi na gburugburu ebe obibi ebe cable ga-gbapụ.
-Ekwu, anyị na-atụ aro na iji 1.5mm * 1 USB, 0.75mm 3 USB na 1.2 14 USB maka obere, ọkara na nnukwu tụrụ, plus 75w / 45w / DMX1002 ìhè engine.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka icho mma ihu ọdọ mmiri, anyị na-atụ aro na iji 10mm n'akụkụ na-egbukepụ egbukepụ emep uta eri na DMX 1002 ìhè engine.
Biko-eziga anyị gị ase na nghọta na chọrọ, mgbe ahụ anyị ga-ezitere gị a quotatio
Olee otú iji wụnye:
1, ike anyị na-ahọrọ dị iche iche ụdị nke emep uta eri na-mbuaha ojiji?
3, Olee otú m pụrụ wụnye eriri optic n'èzí odida obodo ìhè site onwe m?
Previous: Eriri optic chandelier restaurant pendant ìhè, hotel pendant ìhè, n'ọnụ ụlọ ogologo pendant ìhè
Osote: Eriri Optic Lighting maka Garden, Park ngwa anya eriri ọkụ
eriri optic ụlọ ọrụ
eriri optic ọkụ ọdọ mmiri
eriri optic ọdọ mmiri ìhè
eriri optic kpakpando ìhè
eriri optic kpakpando
eriri optic technology
fiberstars ọdọ ọkụ
n'èzí eriri optic cable
ọdọ mmiri eriri optic ìhè
ọdọ mmiri eriri optic ọkụ
kpakpando ndị eriri optic kit
ebe igwu mmiri ọkụ